योजना कार्यान्वयनका लागि चार महिना थोरै समय होइन | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / योजना कार्यान्वयनका लागि चार महिना थोरै समय होइन
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता February 6, 2019	0 118 Views
निमित्त प्रमुख, पूर्वाधार विकास कार्यालय
दाङमा पूर्वाधार विकासअन्तर्गत पुल र सडक निर्माणको काम गर्न प्रदेश सरकारले छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको छ । दाङमा पनि गत मंसिर २ गते पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भई योजना कार्यान्वयनका काम भइरहेको छ तर कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ भएपछि अहिले योजना कार्यान्वयनमा भ्याइनभ्याई छ । ठूलो हिस्सामा रहेको बजेट काम नभइ फर्किने त होइन ? यही विषयमा कार्यालयका निमित्त प्रमुख बासुदेव भण्डारीसग युगबोधकर्मी जे.एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहा प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
पूर्वाधार विकासका योजना के छन् दाङमा ?
प्रदेश सरकारले दाङमा सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार विकासका काम खासगरी सडक र पुलको काम गर्न गत मंसिर २ गते प्रादेशिक पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भएको हो । खासगरी दाङमा हामीलाई चारवटा शीर्षकअन्तर्गत अख्तियारी प्राप्त भएको छ । वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत ४४ वटा योजना छन् । जसमा छवटा पुल र ३८ वटा सडक छन् । यसमा ५० लाखदेखि १० करोडसम्मका योजना छन् ।
सशक्त प्रादेशिक शीर्षकमा १३ वटा सडक छन् । यसमा पनि ३० लाखदेखि एक करोडसम्मका योजना छन् । त्यस्तै सशक्त रणनीतिक सडकअन्तर्गत तीनवटा सडक छन् । राष्ट्रिय ग्रामीण सडक सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि काम भइरहेका तीनवटा योजनाको आवधिक मर्मतका काम गर्न हामीलाई अख्तियारी आइपुगेको छ । त्यो मध्ये वित्तीय समानीकरणमा ६१ करोड ६४ लाख ४४ हजार, सशक्त प्रादेशिकअन्तर्गत छ करोड २० लाख । सशक्त रणनीतिक सडकअन्तर्गत पा“च करोड छ लाख २८ हजार । एसएनआरटीमा पा“च करोड २८ लाख ८२ हजार रुपैया“ विनियोजन भएको छ ।
तपाइहरुबाट सडक र पुलको काम मात्रै हुन्छ ?
हो । भवन, खानेपानी, सिंचाईका छुट्टै कार्यालयहरु छन् ।
चालु आवको सात महिना बित्यो, काम कहा पुग्यो ?
समयको हिसावले सात महिना बितिसक्यो । यो नयॉ“ संरचना हो । गत मंसिर २ गते कार्यालय स्थापना भएको हो । अरु कर्मचारी आउन थप एक÷दुई महिना लाग्यो । कार्यालयमा १८ जना कर्मचारीको दरबन्दी हो । एकजना डिइ, चारजना इञ्जिनियर, सवइञ्जिनियर, लेखापाल, नासु, कार्यालय सहयोगी, गाडी चालकलगायत हुनुपर्ने हो । तर अहिले पनि डिइ हुनुहुन्न । म निमित्त भएर चलाएको छु । एकजना सवइञ्जिनियर र ल्याव टेक्निसियनलगायत अझै पूर्ति हुन सकेको अवस्था छैन । कार्यक्रम धेरै छन् । नया संरचना पनि भयो । कार्यालय गठन भयो । योजना आयो तर त्यसको कुनै अध्ययन थिएन । सबैलाई नौलो भयो । तर पनि हामी जति साथीहरु आयौं, आइसकेपछि मंसिर २८ मै साइड बा“डफा“ड गर्ने काम हामीले गरेका थियौं । हामीसग ६१ वटा योजना छन् । ती मध्ये ४० वटा योजना ठेक्का प्रक्रियामा लगिसकेका छौं । चारवटा पुलको डिपिआर हुदैछ । डिपिआर भएर नआउ“दासम्म कार्यान्वयनमा लैजान सकिदैन । बा“की १७ वटा योजना कार्यान्वयन हुन बा“की छन् आजका मितिसम्म । ती १७ मध्ये १२ वटाको स्टिमेट तयार भइसकेको छ भने चार पा“चवटा योजना चाहि“ अलि गाह्रो–गाह्रो अवस्थामा छन् । खासगरी कोही ठाउमा जंगलबाट लैजानुपर्ने, रुख काट्नुपर्ने सहमति ल्याउनुपर्ने त्यसको प्रक्रिया लामो हुने । नमिल्ने । कुनै ठाउ“मा स्थानीयबीचमै सामान्य विवाद भएर काम अघि बढाउन सकिएको छैन । यी योजनामा ढिलो होलाजस्तो छ । अरु सबै योजना कार्यान्वयनमा लैजान हामीलाई समस्या छैन ।
कार्यान्वयनमा त लैजाने तर सम्पन्न नहुने हो कि ?
पुल निर्माणको योजनाबाहेक अरु सबै यो वर्ष सक्नैपर्छ । किनभने पुल एक वर्ष काम गर्नै लाग्छ । त्यसैले बहुवर्षीय योजनामा हुन्छ पुल । तर सडकको काम यसै आर्थिक वर्षमा सकिन्छ । सक्नुपर्छ । यी सडक निर्माणका लागि आएको बजेट यसै वर्षका लागि मात्रै हो । काम अनिवार्य सक्नुपर्छ । सोही अनुसार चार महिनामा सक्नेगरी काम गर्न टेण्डरमा लगाइएको छ ।
कामको चाप धेरै देखिन्छ, काम सकिन्छ त ?
चाप त धेरै छ । हामीले केहीको टेण्डर गरेर मूल्यांकन गर्दैछौं । केही टेण्डरकै प्रक्रियामा छन्, स्टिमेट बन्दैछन् । जति हामी यहा“ छांै काममा शनिवार नभनी, दिउसो, बिहान नभनी काम गरिरहेका छौं । कानुनी प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुप¥यो । ढिलो भयो भनेर तोकिएका शर्त पूरा नगर्न छुट हुदैन । जेहोस् हामीले फिल्डमा काम गर्न चार महिनाको समय निकाल्नेगरी तयारी गरिरहेका छौं । मलाई लाग्छ सडक निर्माणका काम चार महिनामा सकिन्छ । ठूला योजनामा समय पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने शंका त छ फेरि । समय पुग्दैन भनेर अहिल्यै काम छोडेर बस्नु भएन । काम सक्नेगरी हामी लागेका छौं । ढिलोगरी कार्यालय स्थापना भएको छ र बजेट पनि ढिलो आएको छ भने कर्मचारी पनि ढिलै गरी पठाएको अवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि राम्ररी नै थाहा छ । म्याद थप गर्न पनि सक्छ । त्यो पछिको कुरा भयो तर अहिले जति पनि योजना छन् ती सबैको प्रक्रिया थाल्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । पा“च नम्बर प्रदेशमा पा“चवटा कार्यालय छन् ती सबै कार्यालयमध्ये धेरै काम हामीले गरेका छौं ।
काम सकिएन भन्ने अवस्था आउदैन उसो भए ?
नआओस् भन्ने नै हो । किनभने हामीले सोहीअनुसार कामको गति बढाएका छौं । अर्को कुरा के हो भन्दा सडक पिच नै गर्नुप¥यो भने कति समय लाग्ला ? पाच करोडको बजेटले कति धेरै सडकमा कालोपत्रे होला ? धेरै हुदैन । त्यसैले सबैको चासो चिन्ता हुने हो भने र ठेकेदारले समय दियो भने पाच करोडको बजेटले हुने कालोपत्रे गर्न चार महिना लाग्छ जस्तो लाग्दैन । छिटै काम सम्पन्न हुन्छ । त्यसका लागि सहज होस् भनेर सम्बन्धित क्षेत्रकै सांसदहरुलाई पनि फिल्ड देखाउने काम गरिसकेका छौं र हामी उहाहरुसग सगसगै छांै । उहाहरुलाई निगरानी राखिदिन पनि भनेका छांै भने योजना कार्यान्वयन हुने सम्बन्धित क्षेत्रका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुस“ग पनि सम्पर्कमा छौं । भोलि काम गर्दा कुनै खालको समस्या नआओस् र आइहाले छिटोछरितो समाधान गरेर योजना सम्पन्न होस् भन्नेमा हामी सजग भएर तयारीका साथ लागेका छौं । मलाई लाग्छ चार महिना धेरै समय हो । सडकका काम त दुई महिनामै सकिन्छन् । किनभने चैत, बैशाख, जेठ, असार भनेको त काम गर्ने उपयुक्त समय हो । त्यसैले काम गर्न सकिन्छ भन्ने आशा हामीलाई छ ।
पैसा फ्रिज हुने खतरा कति छ ?
पैसा फर्किने कुरा त काम भए पनि निश्चित छ । भर्खर एउटा ५० लाखको टेण्डर गरेको ५९ प्रतिशत घटेर ठेक्कामा गएको छ । २५ प्रतिशतभन्दा तल त कुनै पनि ठेक्का गएको छैन । २५ देखि ५९ प्रतिशत बिलो टेण्डर हुदा बचेको रकम खर्च गर्ने समय नै छैन । आएकै योजना कार्यान्वयन गर्न धौ धौ भइरहेका बेला बिलो टेण्डरबाट बचेको रकम कसरी काममा लगाउने भन्ने कुरा यसपालि समयको हिसावले पनि नसकिने भइसक्यो । तसर्थ काम भए पनि बजेट फर्किन्छ । जुन कामका लागि आएको रकम हो त्यो काम नभई होइन कि काम गरेर बचेको रकम फिर्ता हुन्छ ।
योजना कार्यान्वयनमा समस्या बजेटको ढिलाइ हो त ?
पा“च महिनापछि मात्रै कार्यालय स्थापना हुनु । कार्यालय स्थापना भएको एक महिनासम्म कर्मचारी व्यवस्थापन नहुनु । छ महिना त संरचना निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमै लागेपछि बाकी छ महिनामा डिपिआर गर्ने, टेण्डर गर्ने, विभिन्न सूचना प्रकाशन गर्ने, मूल्यांकन र आशयपत्र तथा सम्झौतामै समय जान्छ । ढिलाई कार्यालय स्थापनामै भयो । अहिले त यसो गरेमा छिटो हुन्छ कि भन्ने त ठाउ“ नै छैन । हामीहरु अधिकतमरुपमा कामलाई छिटो छरितो सक्नेगरी लागेका छौं ।
बहुवर्षीय कति योजना छन् ?
छवटा पुल हुन् । दुईवटाको डिपिआर पहिले नै भइसकेकाले टेण्डर भइसकेको छ । अरु दुईवटाको डिपिआरका लागि गइसकेको छ भने बा“की दुईवटा सर्भे भइरहेको छ ।
काममा अवरोध आएन भने धेरै योजना बन्छन् ?
हो । काममा अवरोध नआओस् भनेर नै सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरुसग समन्वय गरिरहेका छौं । उहा“हरुले पनि बेला–बेलामा हाम्रा योजना कहा“ पुगे भनिरहनुभएको छ । आउदा दिनमा फिल्डमा काम गर्दा आउने समस्या समाधान गर्ने र काम रोकिने अवस्था आउन नदिन सांसदहरु, राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ । हामीले यहा“बाट गर्ने काम छिटोछरितो गरेकै छौं । फिल्डमा पनि काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुभयो भने योजना सम्पन्न हुन्छन् ।
हतार–हतारमा काम सक्न लाग्दा गुणस्तर आउछ त ?
गुणस्तरै नभइ कन कसरी काम सकिन्छ ? जति पनि काम हुन्छन् ती सबै गुणस्तरीय नै हुन्छन् । काम सक्नका लागि मात्रै हामीले अहोरात्र खटेर काम गरेका होइनौं । कामको स्ट्याडर्ड हुन्छ । छिटो गर्ने नाममा प्रक्रिया भुल्ने हुदैन । सबै कामहरु प्रक्रिया पु¥याएरै गर्ने हो । त्यही प्रक्रिया पु¥याउन समय लागेको हो । हामीले निर्माणकै क्रममा अनुगमन गर्छौं । अनुगमन, निगरानी सबैबाट हुन्छ । हाम्रा इञ्जिनियरहरु खटिनुहुन्छ । साइट इञ्चार्ज खटिन्छन् । हाम्रो आफ्नै ल्याव पनि छ । ल्याव टेष्ट गरेर मात्रै कामको मूल्यांकन हुन्छ । हतार–हतार होइन कि अति व्यस्तताका साथ काम गरेका छौं ।
काम गर्ने समय छैन, भुक्तानीमा समस्या देखेर ठेक्कै नजाने त हुदैन ?
त्यसो ह“ुदैन । जति पनि हाम्रो कार्यालयमार्फत हुने योजना छन्, ती सबैको पूर्ण अख्यितारी हामीलाई आइसकेको छ । यो वर्षको काम असार मसान्तसम्म हुने भएकाले हामीले भुक्तानी पनि त्यतिबेलासम्म दिने हो । ठेक्काको काम सकिने बित्तिकै उसले भुक्तानी पाइहाल्छ ।
हिजोआज नै सम्झौता गरेर एक हप्तामा काम सक्छ कसैले भने एक हप्तापछि भुक्तानी दिन हामीलाई केही समस्या छैन । असार मसान्तभित्र जतिबेला काम सकिन्छ उतिनै बेला भुक्तानी दिन सकिन्छ । तर यो आर्थिक वर्षमा काम गर्न सक्नु भएन भने उहा“हरुको कमजोरी हो ।
Previous: राजधानीबारे सांसदबीच भनाभन
Next: प्रतिष्ठानको समस्या संसदीय समितिमा